Fluid Loss nwekwara-OBC-G75S - China Tianjin Oilbayer S & T
Fluid Loss nwekwara
Echefuola Circulation Agents
Drilling Fluid mmako
Anti-sloughing na igbochi ịkwụnye gị n'ụlọnga
Mmanụ-isi-egwu ọmụmụ mmako
HTHP Ọfọn simenti
Mmanụ-isi-egwu ọmụmụ technology
Product News & ọkwa
Fluid Loss nwekwara-OBC-G75S
Echefuola Circulation Agents-OBC-B62S
Fluid Loss nwekwara-OBC-G80S
Summary OBC-G75S bụ ụdị polyvinyl mmanya ọmụmụ ọnwụ mmako. Na okpomọkụ nke 20 ruo 115 ℃, ọ nwere ike n'ụzọ dị irè ịchịkwa ọmụmụ ọnwụ, belata free mmiri, melite cement slurry si mmezi kwụsie ike. Ọ na-nwere ndị magburu onwe mgbochi channeling ọrụ. OBC-G71S nwere ike na-eji site akọrọ Ịgwakọta. Ọ choo iji freshwater mix slurry. Na ọ na-adịghị mgbochi nnu. Ojiji nso okpomọkụ: 20 ℃ ~ 115 ℃ (BHCT). Na-atụ aro usoro onunu ogwu: 2.0 ~ 3.0% (BWOC). Na ọdabara ụdị ọrụ ọ bụla cement slurry usoro, w ...
OBC-G75S bụ ụdị polyvinyl mmanya ọmụmụ ọnwụ mmako. Na okpomọkụ nke 20 ruo 115 ℃, ọ nwere ike n'ụzọ dị irè ịchịkwa ọmụmụ ọnwụ, belata free mmiri, melite cement slurry si mmezi kwụsie ike. Ọ na-nwere ndị magburu onwe mgbochi channeling ọrụ. OBC-G71S nwere ike na-eji site akọrọ Ịgwakọta. Ọ choo iji freshwater mix slurry. Na ọ na-adịghị mgbochi nnu.
Okpomọkụ: 20 ℃ ~ 115 ℃ (BHCT).
Na-atụ aro usoro onunu ogwu: 2.0 ~ 3.0% (BWOC).
Na ọdabara ụdị ọrụ ọ bụla cement slurry usoro, nke na-dere ọ bụla ọkwa nke mmanụ-ọma cement (kọwara APISpec10A) na ndị ọzọ nwekwara (dị nnọọ ka sịlịkọn ntụ ntụ, kpafuo chaplet, flyash, bentonite, barite ntụ ntụ na hematite).
White ma ọ bụ isi awọ aja aja ntụ ntụ
Njupụta, g / cm 3
Packaged ke 25 n'arọ multi-ply akwụkwọ nchupu na waterproof plastic film n'ime. Ma ọ bụ dabere na ahịa 'arịrịọ.
Ọ ga-echekwara na jụụ, ala akọrọ na ventilated ebe na izere ịbụ oghe anyanwụ na mmiri ozuzo.
Adị ndụ: 24 ọnwa.
Next: Fluid Loss nwekwara-OBC-G80L
Cement Fluid Loss mmako
ọmụmụ Loss mmako
ọmụmụ Loss mmako Starch
ọmụmụ Loss Ukwu nwekwara Amps
elu okpomọkụ Fluid Loss mmako
Polymer simenti ọmụmụ nwekwara Antifoam Ukwu
Polymer Fluid Loss mmako
Polymer Fluid Loss Control mmako
SPACERS NA flushes-OBC- W24L
Fluid Loss nwekwara-OBC-G86S